မှတ်မှတ်သားသား Cameo များ - YOYARLAY Digital Media and News
Cameo!! ကြားဖူးကြမှာပါ။ မြန်မာလိုတော့ ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်ခေါ်မလား ဘာလားပါပဲ… ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တချို့မှာ တကယ့်ကမ္ဘာကျော်တွေက အဓိက သရုပ်ဆောင်မဟုတ်ဘဲ မျက်နှာပြောင်ရုံ အင်း အဲဒီလိုပြောလို့တော့ မရပြန်ဘူး… ခဏတာ တစ်ခန်းလောက် ဖြတ်လျှောက်နေရာက ပါလာတာမျိုးပေါ့ တစ်ခါတလေကျ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကိုယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့သူက မထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ ဝုန်းခနဲပေါ်လာရင် ကျွန်တော်တို့မှာ အာမေဋိတ်အမျိုးမျိုးထွက်လို့ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ကျန်နေခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရဆိုရင်တော့ ဒီရုပ်ရှင်တွေထဲက ဒီသရုပ်ဆောင်တွေပေါ့…။
၁။ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် (MIB 2)
Men in Black II ထဲမှာ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကြီးပေါ်လာတာ သတိရကြသေးလား? ကျွန်တော့်မှာတော့ တကယ်ကို ပါးစပ်အဟောင်းသားပါပဲ.. ဟာ ခနဲဖြစ်သွားပြီး ခွီတာ၊ ခွီတာ ဆိုတာလေ.. မြင်လို့တောင်မကောင်း… Will Smith နဲ့တင် အတော်ခွီနေရပါပြီဆိုကာမှ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကြီးက သူလည်း အေးဂျင့်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်တော့ ခေါ်မှာလဲဆိုပြီး မေးနေတဲ့အခါမှာ ပတ်တုပ်လို့ မရတဲ့ထိ ကျွန်တော် ခွီခဲ့မိပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း မှတ်မိကြဦးမှာပါနော့်.. မမှတ်မိရင်တော့ Men in Black II သာ ပြန်ကြည့်ပေတော့ 😀
၂။ ဒေါ်နယ်လ်ထရန့် (Home Alone 2)
ဝန်ခံလိုက်ပါ… မသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လား 😛 ကျွန်တော်လည်း သတိမထားမိပေါင်… ဟိုနေ့က ပျင်းပျင်းနဲ့ Home Alone ရုပ်ရှင်စီးရီးစ်တွေ ပြန်ကြည့်တော့မှ ဒီဘဲ ဒေါ်နွယ်ထွန်း အဲလေ ဒေါ်နယ်လ်ထရန့်နဲ့တူပါတယ်လို့ ကြည့်နေတာ… ပြီး ဂူဂဲလ်ပြန်ခေါက်တော့မှ သူမှသူ အစစ်ပဲဗျား…အဲဒီတုန်းကတော့ သူက ကမ္ဘာမှာကျော်ကြားတဲ့ သူဌေးကြီးဆိုပေမဲ့ ခုလို သမ္မတအဖြစ် ဟုန်းဟုန်းတောက်နေတဲ့ အချိန်မဟုတ်ဘူးလေ.. နော်… Home Alone တောင် ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ? မက်ကောလေးကော်ကင်တောင် အတော်ကြီးလှရှိနေပြီဟာကို… ကျွန်တော်ပြောတာ မယုံရင် ခင်ဗျားတို့ ပြန်ကြည့်ဗျ… ကလေးလေးကို လမ်းညွှန်ပေးနေတာ ဒေါ်နယ်ထရန့်မှ ဒေါ်နယ်ထရန့်ကြီး.. မယုံမရှိနဲ့ 😛
၃။ မက်ဒေမွန် (Thor : Ragnarok)
မြင်တော့မြင်လိုက်သလိုလို… မက်ဒေမွန်မှန်းမသိလိုက်ဘူးမလား 😀 ကျွန်တော်လည်း အစက အဲဒီလိုပဲ… ဒီဘဲ ငါမြင်ဖူးပါတယ်ပေါ့…. ဘယ်ဟုတ်မလဲ မက်ဒေမွန်ကြီးဖြစ်နေတာကိုး 😀 ဘယ်နေရာကလဲရောသိလား? Loki နေရာကခင်ဗျာ.. သိတယ်ဟုတ်? လိုကီက အိုဒင်အယောင်ဆောင်ပြီး သူနဲ့သော် အကြောင်း ပြဇာတ်ကြည့်နေတဲ့အခန်းလေ.. အဲဒီ ပြဇာတ်ထဲက လိုကီဟာ မက်ဒေမွန်ပါ… ပြဇာတ်ထဲက သော် နေရာမှာတော့ သော် သရုပ်ဆောင်မင်းသား ခရစ်စ်ဟမ်းစ်ဝါ့သ်ရဲ့ အစ်ကို လုခ်ဟမ်းစ်ဝါ့သ်ပါတဲ့ 😀 ခု ပြန်ကြည့်တော့မယ်မလား 😛 ကြုံတုန်းပြောရရင်ဖြင့် Deadpool2ထဲမှာလည်း မက်ဒေမွန်က Cameo အဖြစ်ပါသေးတယ်နော်… ဘယ်နေရာလဲဆိုတာတော့ မပြောပြပု.. အဆုံးထိ ကြည့်ကြ :3
၄။ ရွိုင်ရန်ရေးနိုးလ်ဒ် (Deadpool 2)
ဒါတော့ Cameo လို့ ပြောရင်ကောင်းမလား၊ မပြောရင်ကောင်းမလားပေါ့… ဘာလို့ဆို ဝိတ်ဒ်ဝီလ်ဆင် (Wade Winston Wilson)ဆိုတဲ့ Deadpool ကလည်း သူကိုယ်တိုင်ပဲကိုး.. Deadpool2မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေတော့ ဒါလေးကျော်ဖတ်နော်.. စပွိုင်လာဖြစ်သွးမှာစိုးလို့… ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က သူ့ကို ဘာလို့ Cameo စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်ရလဲဆိုတော့ post credit scene မှာ ဝိတ်ဒ်အနေနဲ့ ပါလာတာမဟုတ်ဘဲ ရွိုင်ရန်ရေးနိုးလ်ဒ် အနေနဲ့ ပါလာတာမို့ပါ.. ရုံထဲမှာ ပါးစပ်အဟောင်းသားပါ ဖြစ်သွားတဲ့အခန်းပေါ့… Green Lantern ဇာတ်ညွှန်းဖတ်နေတဲ့ မင်းသား ရွိုင်ရန်ရေးနိုးလ်ဒ်ကို သကောင့်သား Deadpool က သွားသတ်ပစ်တာလေ.. DC နဲ့ Green Lantern ကို ဘယ်လောက်တောင် စိတ်နာနေတယ်မသိ 😀 ခွက်ဒစ်ဆင်း မကြည့်ရသေးဘူးလား.. ပြန်သွားကြည့်လိုက်ဦး.. ခွီရချက်က ကိုး အပေါင်းပဲ 😀 ပုံထဲကလိုတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ.. ပုံက ရရာဆွဲသုံးရတာကိုး :3 DP2အကြည်မထွက်သေးဘူးလားလို့.. ထွက်ရင် ပြောကြဦး 😀
၅။ စတန်လီး (Stan Lee)
မပြောလည်း သိနေပြီဟုတ်? Marvel ရဲ့ ဘယ်ကားတိုင်းမဆို သူ့ကိုစောင့်နေရတာ အလုပ်တစ်လုပ်… ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုများပေါ်လာမလဲပေါ့ 😀 ဇာတ်ကားတိုင်း မတူတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ ပေါ်ပေါ်လာသကိုး.. ဒါကြောင့်လည်း ဖန်တွေက သူ့ကို The Watcher ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး သီအိုရီတွေ ထုတ်ကြတာ.. ဘယ်ဟီးရိုး ဘယ်နား ဘယ်လိုနေနေ သူပါတယ်… မပါမပြီး 😀 Big Hero6ထဲတောင် ပါသေးတာ :3 သူ့ရဲ့ Cameo တွေကိုတော့ ဒီမှာသာ စုကြည့်ပါတော့…
ဒါတော့ ကျွန်တော်သတိထားမိ၊ ခွီမိသလောက်ပေါ့လေ.. တခြား Cameo တွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဖတ်ရတာ ပျင်းစရာကောင်းမှာစိုးလို့ ထည့်မရေးတော့ဘူး.. ခင်ဗျားတို့ သိတဲ့ Cameo တွေလည်း ထည့်ရေးပေးသွားဦးနော်… ။
Previous Previous post: လူတော် ဆိုသူတွေကိုတောင် နောက်ကောက်ကျသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ
Next Next post: စားသောက်ဆိုင်မှာ မွေးခဲ့လို့ ဆိုင်က စားစရာတွေကို တစ်သက်တာ အခမဲ့ စားသုံးခွင့်ရသွားတဲ့ ကလေးငယ်
ကမ္ဘာကျော် ပေါ့အဆိုတော် လေဒီဂါဂါ က အမေရိကန်နိုင်ငံ လက်ဗိးဂတ်စ်မြို့မှာနေထိုင်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်ဆိုတာ မှန်ကန်တယ်လို့ တွစ်တာကနေ တဆင့် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Post Views: 2,584
Published: December 20, 20177:55 am Updated: May 6, 20194:53 pm